Kutungamira Kudzidzisa | Hutungamiri Hutungamiriri | NextMping
Iwe unonzwa uine chivimbo nezveramangwana here? Iwe unofara nezve zvinogona kuitika kwauri nebhizinesi rako mune ramangwana?
Yedu Ye NextMapping ™ hutungamiri coaching ichakupa iwe maitiro, kutsigira uye kutungamira kuti ugadzire yako yakanakayo nguva yemberi. Wese munhu anobudirira anoshandisa bhizinesi makoji kana hutungamiriri kudzidzisa nenzira yemuperekedzi / mukoti / gwara.
Our InoteveraMapping ™ yakavimbika bhizinesi makochi anozobatana newe kuvaka zano, kukurudzira ramangwana rako rebasa mindset uye kukubatsira kukudziridza hunyanzvi hunodiwa kuti iwe ubudirire uye uwedzere kukurumidza uye uchikurumidza kuchinja nguva.
Kuenderera mberi kwekukanganisa kucharamba kuchikura zvakanyanya - uyo anotevera mukwikwidzi ndiye muzvinabhizimusi ane pfungwa dzakagadzira Air BNB, Uber, Dropbox naTesla. "
Kune marudzi maviri e mindsets ...
… Ine vanhu nezve ramangwana:
1. Ndinozonetseka nezvazvo kana ikanyatsondibata / bhizinesi… KANA 2. Uya nayo! Ndiri kufara nezveramangwana uye ndichaita zvese zvandinogona kuti ndigadzirire ini / timu yangu / bhizinesi. Pfungwa yekutanga ndeyekushomeka kwepfungwa kwakanangana nekudzivirira chinzvimbo uye kutya shanduko. Yechipiri mindset ndeye yakawanda pfungwa inoisa pfungwa pakutora kutonga uye kupihwa simba chiito chekuratidzira rako ramangwana rinoshamisa. Rimwe rematambudziko makuru kune vatungamiriri, zvikwata uye vezvemabhizinesi kugara vakafemerwa uye vakatarisa kune ramangwana. Vatungamiriri vazhinji vanotarisa pazvinhu zvezuva nezuva, kudzima moto uye kazhinji vanorasikirwa nekutarisisa kana kutungamira kune ramangwana rinokurudzira. Kuti vagadzire zvinogara zvichiitika uye zvinodzokororwa hunhu hwakakwidziridzwa vatungamiriri vanofanirwa kuve nehurongwa hwakavakirwa pakugadzira inoteedzera 'chii chinotevera' pamwe nekuzvidavirira kuita shanduko dzakakodzera kuti dzive ramangwana rakagadzirira. Iko kune sainzi kushanduko uye hunhu masayendisiti akaona zvinhu zvakakosha zvekugadzirisa shanduko neziso pane ramangwana. Izvo zvinhu zvakakosha zvinosanganisira kuda kushanduka, kuchinjika kwepfungwa, maitiro matsva uye kutarisisa kune chinomanikidza 'nei'.
Mashandiro Ehutungamiri Anoshanda sei:
PaNextMapping tine chirongwa chevadzidzisi chinobatsira vatungamiriri, nhengo dzechikwata uye vanamuzvinabhizimusi kutora budiriro yavo kune iyo 'inotevera' nhanho. Isu tinoshandisa nhanho nhanhatu dzeNextMapping kugadzira chirongwa chedzidziso chetsika chinotanga nekwauri ikozvino uye nekwaunoda kuenda. Isu tinotanga nekuongorora kweako azvino mamiriro kuburikidza neyedu Tsvaga maitiro uye mukati mehutungamiriri hwako hwekudzidzisa chirongwa isu tinobatsira kuona kusimba nenzvimbo dzemukana wekuti iwe uwedzere kugona kwako uye mhedzisiro. Varairidzi vedu vanozivikanwa NextMapping nyanzvi uye vanoshandisa yedu yakasarudzika murairidzi / bvunza nzira yekushanda newe. Kudzidzisa hutungamiri kunoda kuti iwe semutungamiri kuti ude kuzviongorora, kuve nehanya nekuita shanduko uye kuzvipira mukutungamira shanduko nezvikwata zvako. Sewe murairidzi wako wega wehutungamiriri tinokubata iwe kuti uzvidavirire kune zvinangwa zvako, isu tinobatsirana newe kuronga mazano matsva, isu tinokubatsira kuronga mepu yekugadzira ramangwana iwe raunoda. Wakatobudirira! Vatungamiriri vanobudirira kwazvo vanoisa mari pakuva nemaonero ekunze uye rutsigiro rwemurairidzi wehutungamiriri. Kunyangwe iwe watove nehutungamiriri kudzidzisa kana kwete isu tinogona kukubatsira iwe kuzadzikisa zvinangwa zvako zvekujekesa.
Isu matanho ekubatanidza
Isu matanho ekubatanidza anosanganisira sainzi, data, hunyanzvi hwevanhu uye maitiro ekugadzira shanduko dzisingagumi.
Isu pano paNextMapping ™ tine nzira yakaratidza uye hutungamiri kudzidzisa nzira yekubatsira iwe:
Fambisa iyo inomhanya nekukurumidza kumhanya kwekuchinja uye kusingaperi kuvhiringidzika uine chivimbo uye nyore
Vaka yako chaiyo nguva kusimba uye kugona ruzivo
Reframe matambudziko ako akakura mumikana yako mikuru
Wana mamiriro akakura pane ako 'nei' uye chii chiri mberi kwako nebhizinesi rako
Rangarira zvekare uye uvandudze iyo "OS" (mindset) yakanangana nekuwanda uye nekupa shanduko hutungamiriri nechiratidzo chinokurudzira chenguva yemberi
Tungamira zvikwata zvako nekambani nemaitiro anowedzera kukurudzira kwevashandi, kuvimbika uye mipiro
Hwirudzura mutengi sevhisi yekusvitswa kuti igadzire fanika vateveri vekambani yako
Kuwedzeredza digitization marongero ekuwedzera anobudirira ega uye bhizinesi
Remonentially kukura bhizinesi
Mubvunzo wakanaka wekuzvibvunza iwe
"Chii chatinofanira / isu kuti tichinje kuti tigone kumberi mberi muzvinangwa zvedu nezvibodzwa gore rimwe kubva zvino?"
Wakatobudirira - UYE kushandisa NextMapping ™ hutungamiri kudzidzisa kunogona kuvimbisa iwe uchaita kufambira mberi kunoenderana nezvakarongwa zvakanakisa zvirongwa. Ichokwadi ndechekuti iwe unogona kunge uchimhanya nekukasira sezvaungakwanise, simba rako rinobva mukuremerwa kuenda mukufemerwa mune inodzokororwa maitiro uye iwe unoziva kuti kuva nenguva zhinji dzekurudziro uye chiito chakanangana chinokutungamira kuzvinangwa zvako. Unogona kuzviitira zvipikirwa iwe pachako nechikwata chako izvo zvisingaitwe nekuda kwekushaya nguva kana kushomeka kwekuisa pamberi. Izvo 'izvo' zvinoda kuchinja ndezvekutarisa mukugadzira yako inoshamisa ramangwana nerubatsiro rweanoda kuzvidavirira shamwari, weNextMapping ™ bhizinesi murairidzi. Yedu inoteveraMapping ™ hutungamiriri kudzidzisa inobatsira vatungamiriri senge iwe kushandisa yedu yakavhenekerwa NextMapping ™ murairidzi nzira yekukubatsira iwe kuzadzisa zvinangwa zvako. Email kwatiri pa michelle@NextMapping.com kubhuka rako hapana zvaunosungirwa musangano.
Funga kuti Hutungamiri Hwangu Kudzidzisa ndiyo yakanakira mhinduro iwe?